အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် & ငါးအလုံးလေးပြုလုပ်သည့်စက်အပလီကေးရှင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အစေ့များမှလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, မြက်ပင်, စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပရိုတိန်းနှင့်သကာ. ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အစာတောင့်သည်ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်, အာဟာရကြွယ်ဝသောဖြစ်ကြသည်, ထူးခြားတဲ့အရသာရှိသည်, နှင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးစုံ၏ဖြစ်ကြသည်. ၎င်းတို့သည်ပုစွန်ကဲ့သို့ရေနေသတ္တဝါများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ရွှေငါး, ငါးခူ, အပူပိုင်းဒေသငါးစသည်တို့ဖြစ်သည်.
ငါးအစာတောင့်သည်ခေတ်မီစီးပွားဖြစ်ငါးမွေးမြူရေးတွင်လူကြိုက်များသောအစာဖြစ်သည်, ငါးသိုလှောင်ရုံများလိုအပ်သည့်မျှတသောအာဟာရနှင့်ငါးမွေးမြူရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေရန်. စျေးကွက်တွင်အစာတောင့်များ၏စျေးနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, လယ်သမားအများစုသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်အလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်ငါးလေးများထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုဝယ်ယူလေ့ရှိသည်. ဤနေရာတွင်ရေပေါ်အစာလုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ခြောက်သွေ့သောငါးအစာကျွေးရန်အကြံပြုသည်, ၎င်းသည်ကုန်ကြမ်း၏ရေငွေ့အေးစက်ခြင်းမရှိဘဲအရည်အသွေးမြင့်မားသောရေပေါ်ရေကူးခြင်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်. ခါးပတ် drive အားဖြင့်အဆင့်မြင့်တစ်ခုတည်းဝက်အူ extruder နှင့်အတူ, ရေပေါ်ငါးလုံးလေးများထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အငယ်စားနှင့်အလတ်စားအစာထုတ်လုပ်သည့်အပင်များနှင့်ငါးမွေးမြူရေးတို့တွင်စံပြကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်.
●ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း။ အစာကျွေးခြင်းတွင်တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းနှင့်အပင်ပရိုတင်းပါဝင်သည်. အပင်ပရိုတင်းသည်ပြောင်းဖူးမှလာသည်, ဆန်, ဂျုံ, ပဲပုပ်, မြေပဲကိတ်မုန့်အမှုန့်, စသည်တို့; တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းငါးမုန့်ညက်ကနေဖြစ်ပါတယ်, ပုစွန်မုန့်ညက်, ကဏန်းမုန့်ညက်, လက် - ငါးမုန့်ညက်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အစာစားခြင်းအလေ့အထအရအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်နိုင်သည်.
●အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်စဉ်များ:ပစ္စည်းကြိတ်, ပစ္စည်းရောစပ်, extruding လုံးလေးများ, လုံးလေးများခြောက်သွေ့, နှင့်တောင့်ထုပ်ပိုး. လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအလွန်အမင်းအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
2. The လုံးလေးများထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုကျွေးပါ ထပ်မံ၍ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုအပ်ပါ. အဆိုပါ modular ဖွဲ့စည်းပုံတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် disassembly များအတွက်အဆင်ပြေသည်, အဆိုပါတင်ပို့ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်လွယ်ကူချောမွေ့.
3. အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ထားသည်, နှိုးစက်ကိရိယာရရှိနိုင်ပါသည်. စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသည်.
4. ကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်နယ်ပယ်: ရေပေါ်ငါးလေးများပြုလုပ်သည့်စက်သည်ရေပေါ်နှင့်နစ်မြုပ်နေသောငါးအစာနှစ်မျိုးလုံးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ငါးမွေးမြူသူများနှင့်ငါးအစာထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကျုံးဝင်သည်.